Uma amalunga omzimba esintamo izandla nezinyawo, iyiphi enzeni esimweni esinjalo? Yiqiniso, into yokuqala efika emqondweni - ukuya emtholampilo ukuze udokotela wakhe wesifunda, futhi ngakho ngandlela-thile ukuhlunga ukuthi yilokho: linqume ukuhlolwa noma ubheke abanye onguchwepheshe. Nokho, abaningi bethu ukuthi kwenzeke kanjani nzima ukuthola isikhathi uhambo esibhedlela, ngoba kuyodingeka isikhathi sokungabikho emsebenzini ke, kungenzeka ahlale phandle lapho emgqeni noma ukupheka ethile imali Ukuvakashela isikhungo sezokwelapha ikhokhwe.
Ngokuvamile, abantu kukhona ukungqubuzana okuningi esivuna self-ukwelashwa ekhaya. Futhi hhayi okungaka ezingavamile ukuthi kuyasiza ngempela. Nokho, kulesi sihloko uzothola izindlela ezimbalwa ethandwa ukusiza nge ubuhlungu bamalunga ezihlukahlukene, kanye uhlu izidakamizwa ukuthi enzelwe ukuba baxazulule izinkinga ezinjalo. Kodwa okokuqala, sikucebisa ukuba sikuthathe njengokungathi sína ukuba kokufunda isahluko indaba yethu ezayo.
Ukubuza besidindilize engu- ngamunye: "Uma amalunga omzimba esintamo izandla nezinyawo, yini okufanele uyenze", Abantu ngokuvamile abaqapheli ukuthi ubuhlungu okuphazamisayo yabo kungaba esigabeni sokuqala ukugula okungathí sina, ukuthuthukiswa zazo kungenzeka ukumisa noma ukubambezela ngendlela efanele usaqala lapho izinqubo elimazayo emalungeni asikabi babi kakhulu.
Ngokuphatha ngokwakho ngokusebenzisa lotions, kudlula, yokuthoba, nokunye. E., Umuntu ogulayo ubeka impilo engozini labo elikhulu. Phela, amakhambi ekhaya akuzona neze ngakho ephephile kakhulu futhi zingase contraindicated ku ezifweni ezithile.
Ngokwesibonelo, kukhona umbono wokuthi ukuze ukuxazulula ngokushesha izinkinga nge emalungeni akukho lutho olungcono kuka ukufudumala. Kodwa akunjalo! Uma lesi sifo kuhambisana nokuvuvuka kwamalunga iziguli yisihlungu acute zenzeka, kukhona ukwanda sendawo lokushisa, umphumela ukushisa endaweni inkinga kungaba kuphela babhebhethekisa lesi simo. Uma amalunga omzimba esintamo izandla nezinyawo, izimbangela, izimpawu, zemithi yokwelapha kufanele kuqale nalabaya Ochwepheshe (wamathambo, traumatologist wamathambo noma).
Thina Awuyi kokugxeka imali zabantu lapha: lokhu kungaba ithuluzi elikahle ekulweni izifo ezihlukahlukene, kodwa ngemva kokuba udokotela ine ukuxilongwa okufanele nokwenza izincomo ngokuthi yini engaletha kusizakale emalungeni, nokuthi umonakalo.
izimbangela ezihlukahlukene ubuhlungu bamalunga
Kungani amalunga omzimba wakho Ache futhi ukuthi benzeni Kulezi zimo, ke kuyoba lula kakhulu ukuba baqonde uma ukwazi izizathu ezibangela ukuqaqamba, amajaqamba emilenzeni kanye nomkhawulo motor zabo imisebenzi. Nazi ezinye izifo ezivame kakhulu ngokuhlanganyela:
1. samathambo Arthritis. Izifo ezingelapheki nazo lapho izinqubo ukuvuvukala ebonwe izicubu zezinzwa. izimpawu Isici ohambisana sokuqaqamba kwamalunga:
Ubuhlungu eyodwa noma ngaphezulu emalungeni liyakhula kancane kancane phezu amaviki amabili, noma kungenzeka ngokuzumayo. Ngezinye ukuphumula, ukwanda ubuhlungu, ikakhulukazi babonakala ekuseni.
rheumatoid arthritis okungenzeka bahlukunyezwe njengoba emalungeni enkulu ezandleni nasezinyaweni (isihlakala, iqakala, indololwane, idolo) bese encane izinyawo amalunga izandla. Ukuvuvukala ngokuhlanganyela ngokuthi monoarthritis, eziningana - polyarthritis.
Omunye izimpawu zesifo okukhulunywa - Umkhawulo ukuhamba kweziguli esitho, ngemizuzu yokuqala kuqale ngemva Awakening ekuseni.
Lesi sifo kuhambisana nokwenyuka wawubona emalungeni, ububomvu kwesikhumba ezindaweni inkinga futhi ukwandisa ukuzwela yayo.
2. rheumatism. Kulesi isifo esingelapheki kancane kancane kuthinta zonke izinhlaka (inhliziyo, izinso, uhlelo lymph, nokunye. D.), Kubandakanya emalungeni. Inqubo ingase ihlale iminyaka. Kubalulekile ukuqala ukwelashwa kusenesikhathi. Omunye izici eziningi isici rheumatism ekuqaleni - ke ubuhlungu nje ngokuhlanganyela ezivukayo ngezikhathi ezithile, ngezinye izikhathi zihambisana imfiva kanye edema.
3. I-osteoarthritis. Lesi sifo ezihambisana nezinguquko dystrophic-esiwohlozayo oqwangeni, ukubamba iqhaza kancane kancane inqubo sokugembula kwethambo, ligamentous, izicubu lwamalunga. I sokuqaqamba kwamalunga njalo iningi kwedolo, hip indololwane amalunga omzimba. Izimpawu ezisemqoka:
isici esiyinhloko - ubuhlungu ukuthi kwenzeka ngenkathi ushayela noma umthwalo joint ethintekile;
Umkhawulo kancane kancane ukuhamba. Uma lesi sifo zingelashwa, inqubo bathuthuke ngokushesha, okuyinto kuyogcina kubangele ukukhubazeka.
4. Ukulimala, ukulimala, ngokomzimba nokulayishwa amalunga omzimba.
5. Ukuvuvukala Kwamalunga - ingenye izinhlobo zesifo sokuqaqamba kwamalunga.
amalunga omzimba Stiff izandla nezinyawo: yini okufanele uyenze?
Ake wenze uhlaka izinyathelo eziyisisekelo ezidinga njalo kuthathwe uma izinhlungu ngokuhlanganyela:
1. ukuze kutholakale imbangela yokushona ubuhlungu kufanele azame ukuqinisekisa ukuthi amalunga omzimba ezolile.
2. Yiba ezinye izidakamizwa nonsteroidal eqeda ukuvuvukala (uhlu izidakamizwa ezifana ishicilelwe ku-athikili yethu ngezansi).
3. Funa ukuhlonza izimbangela zobuhlungu esibhedlela.
4. Thola udokotela isiqondiso esiningiliziwe ekwelashweni zemithi futhi imithi ukuthi kudingeka lisetshenziswe kanye uthintane mayelana nokwelashwa kwabantu, uma uya ukusebenzisa lezo.
Isifo Sokuqaqamba Kwamalunga - ngokuvamile kuba nobuhlungu obukhulu enhlanganisweni yebhantshi lensimbi, izandla. Yini angayenza kulesi simo? Isiguli kumele bakuqonde ukuthi ukwelashwa kuzodinga eziningi izinyathelo eziyinkimbinkimbi. Phela, udinga ukususa hhayi kuphela ubuhlungu lingaze, kodwa futhi inciphise ukuvuvukala, ukubuyisela evamile igazi ligeleze emisipheni abathintekayo bese uqwanga, nokunye. D. Ukuze wenze lokhu, udokotela wakho angase akunikeze, ngaphezu non-steroidal izidakamizwa eqeda ukuvuvukala, ngisho nemithi elwa namagciwane. Singabantu kulesi sihloko angakunika omunye iresiphi omkhulu of imithi yendabuko.
Isifo sokuqaqamba kwamalunga ukusiza kahle cindezela uju kanye iklabishi. Okwenza kwadingeka ukuba sokulala. Kuyadingeka ukuthatha fresh iklabishi leaf, shisisa it up, bendlale ungqimba elincanyana uju kanye ohlangothini buttered unamathisele endaweni obuhlungu. Fitizela phezulu embozwe epulasitikini, amabhandishi futhi ezisonga isikhafu efudumele wenza yoboya. Ekuseni isiguli ngokuqinisekile bazizwa sikhululeka.
Amalunga ezidabukile izinyawo nezandla kaningi kubangelwa iziyaluyalu umzimba emzimbeni. isifo Ukuvuvukala Kwamalunga - uhlobo lwesifo samathambo, umngane njalo abantu yesimanje, it is ikakhulukazi ihlushwe wobulili namandla. Mhlawumbe wonke wezwa igama elithi: ". Usawoti ezifakwa emalungeni" Abanye bafunda ukuthi into yonke e usawoti ezivamile, kodwa akuyona.
Lapho sifo emalungeni imali uric acid, futhi lokhu kwenzeka ngenxa ukusetshenziswa njalo inyama, inhlanzi kanye okunamafutha utshwala. Ukubhema nakho kunomthelela ukuthuthukiswa inqubo sokugembula. Uma amalunga omzimba kakhulu ukuvuvukala esintamo of iminwe yakhe nezinzwani zakhe ke mhlawumbe ukungakhululeki kufakazelwa ukuba khona sifo.
Lesi sifo kulula ukuze kuvinjelwe kuka ukuze ikhambi. Baphetha ngokuthini esiyinhloko zokuvimbela lesi sifo - ukudla okufanele. Ayikho into elukhuni: kuyadingeka ukwethula ku ekudleni kwakho imifino ngaphezulu, lonke okusanhlamvu okusanhlamvu kusuka okusanhlamvu, izithelo, ushizi noma udikile ugwayi kanye neminikelo yakho yokuphuzwa, utshwala.
Namuhla okuningi abantu sokukhononda ngokuthi bona kukhona amalunga omzimba sore ezandleni nasezinyaweni. Kuthiwani uma nobuhlungu obubangelwa i-osteoarthritis? Nalapha futhi, cishe, ngeke akwenze ngaphandle ama-NSAID: bayokusiza ngokushesha ekunciphiseni inhlupheko. Ukubonisana nodokotela liyadingeka. Kuyohlale kudingeka ukwenza x-ray - kuyosiza udokotela ukunquma degree of ukubhujiswa ngokuhlanganyela.
Esikhathini nokwelashwa arthritis, ngaphezu izidakamizwa eqeda ukuvuvukala, indima ebalulekile udlalwa yi-chondroprotectors reception (izinto ukubuyisela uqwanga articular). Amalungiselelo ingase yabelwe "Artra", "chondroitin sulfate" "hondrolon" "Teraflex" "Struktum" futhi m. P.
Okuhle yemvelo chondroprotector okunye - lena gelatin evamile, ezingasetshenziswa ithengwe ezitolo. Lo mkhiqizo ukuba buhlanjululwe ngamanzi afudumele futhi baphuze izikhathi eziningana ngosuku. Nokubuyiselwa okusheshayo uqwanga etuswayo ukulungiselela jelly okuzenzela noma jelly, lolu hlobo luqukethe inani elikhulu izinto zemvelo ukuthi ukwakha uqwanga.
amalungiselelo ezenza imithi
Sine izikhathi eziningana ngesikhathi kukhulunywa udaba ku-athikili yethu "Okufanele ukwenze uma amalunga omzimba wakho Ache izingalo nemilenze," wabhala ukuthi ubuhlungu nokuvuvukala imithi kahle ukususa non-steroidal anti-inflammatory, ama-NSAID elifushane. Ekwelapheni emalungeni kukhona wamafutha ngempumelelo kakhulu kuleli qembu. Nalu uhlu encane yalezi imithi:
"Voltaren Gel" nokunye. D.
Sebuhlungwini obunzima ayikwazi kungagcini yokugcoba eyodwa yangaphandle futhi zamukele kakhulu ama-NSAID amaphilisi noma izimpushana:
Uma obuyisimanga udokotela ubuhlungu bamalunga ukubelesela angase abone kudingekile ukuba kudlule nesineke yimuphi ukwelashwa ngokomzimba:
phonophoresis noma electrophoresis;
transcutaneous ukushukuma kagesi;
Upharafini futhi izicelo nokunye. D.
Ukwelashwa amalunga yokugcoba okulungiselelwe zokupheka athandwayo
Siyaqhubeka okwengeziwe cabanga isihloko sihloko: "? Kuthiwani uma emalungeni ngiyaqaqanjelwa" Ukwelashwa nge yokugcoba, uzilungiselele bebodwa, kungaba kwalokho omkhulu emuva kokulandela izinqubo ezinqunywe kudokotela. Yimaphi lawo mathuluzi nokuthi uzosinikeza kanjani kubo?
1. Wamafutha for rheumatism. Ukuze alungiselele, uzodinga 100 g, okuyilona elidingekayo ukuze uhlanganise nomunye lwesinaphi powder kanye 200 of sodium chloride, bese ufaka okuholela lwesinaphi usawoti ingxube njengoba kaphalafini ukuthola mass, efanayo kwabantu bayo ukhilimu omuncu. Umuthi wagcoba on ebusuku izindawo obukhulu.
2. Wamafutha sokuqaqamba kwamalunga uju kanye amaqanda izikhupha. Thatha isikhuphasha kwebha amaqanda, bee wax (ezincane) kanye 1 tbsp. l. uju. Ekuqaleni, kukhona ibhathi amanzi ukufuthelana isikhuphasha, okuyinto ke Liyashabalala wax noju notshwala. Zonke kuxutshwe ukwakha wamafutha eyohlobo. Ukuze isicelo ithatha ucezu gauze, eligoqiwe izingqimba eziningana, it is wabeka mass esishisayo, futhi kuleli fomu le nomuthi lisetshenzisiwe ngokuhlanganyela kanye kahle fixed ngebhandeshi.
3. Wamafutha for ekwelapheni arthrosis ngokuhlanganyela. Zithathwa ezingxenyeni alinganayo amahlamvu sembabazane, amajikijolo zokhuni (green), namafutha imvu. Amajikijolo kanye namahlamvu kahle ochotshoziwe esigqulweni bese kuhlanganiswe ngamafutha. Namafutha eqeda kufanele wagcoba ku emalungeni e Ekuseni nantambama.
Ukwelashwa nge namalahle isebenze
Kunendlela ezilula kodwa eziphumelelayo for ekwelapheni amalunga sifo. Lokhu kuzodinga carbon isebenze. Kusukela leli thuluzi kuyodingeka ukupheka pasta. Lokhu kwenziwa ngendlela elandelayo: amaphakethe eziningana ezibhebheni amalahle ukuthi triturated amanzi kancane sengezwe kanye 1 st. spoon flaxseed othulini. Ngemva obuphelele ukuxuba unama ezigcotshwe ngobusuku joint ethintekile, bese yena wabopha futhi wazicabangela ngokufudumele phambi ekuseni.
Nansi enye indlela omkhulu kazwelonke sokuphulukiswa, uma emalungeni umlenze nezandla ubuhlungu. Izimbangela kanye nokwelashwa kwezifo eziningi esixoxe futhi wathola ukuthi izifo ezahlukene kakhulu futhi kufanele luphathwe ngendlela ehlukile. Kodwa kukhona iresiphi cishe jikelele - ke licindezele, izindlu zokugeza, ezisonga ezenziwe ngobumba, okuyinto lungasetshenziswa for arthrosis kanye arthritis kanye nezinhlungu rheumatism. Clay aqede ngokuphelele ubuhlungu, kunciphisa ukuvuvukala nokuvuvukala, ubuthi abancela kusuka umzimba, nokunye. D.
Isiko Physical futhi Ezemidlalo: inzuzo noma ukulinyazwa amalunga omzimba
Kulabo abathanda kakhulu umzimba wezemidlalo, ngokuvamile ubuhlungu emalungeni. Kuthiwani uma amadolo ezidabukile nasemaqakaleni emva iphelela eside olunzima lwamasonto zenzeka, kubonakala, egameni impilo? Ukuze uqale kubuketa indlela yabo yokuphila. Noma yimuphi ukweqisa ziyingozi - lesi sitatimende akunakubangelwa ezemidlalo.
Ukuze asuse umuzwa ukungakhululeki njalo enhlanganisweni yebhantshi lensimbi, izinyawo, ngezinye izikhathi umuntu kwanele kuphela ukwehlisa umzimba. Ukukhuthaza impilo kuyinto ukugijima ezinhle noma ukuhamba (kubantu asebekhulile), umzimba ekuseni, i-yoga, ukubhukuda. Kusukela zonke emalungeni ngenhla cishe Ache. Kunalokho, lo msebenzi onjalo uyogcwalisa amandla nokukhuthazela.
Sithemba ulwazi oluqukethwe kulesi sihloko kuzokusiza labo babe amalunga omzimba sore ezandleni nasezinyaweni. Izifo kanye zokwelapha, zokupheka bendabuko kanye nohlu nezidakamizwa nonsteroidal eqeda ukuvuvukala - zonke lezi zinhlobo zezindwangu ziye uzifunde ngokucophelela yithi ngaphambili bese zibekwe kuwo wonke ukubona. Sebenzisa lolu lwazi ukuthi ezempilo ake amalunga omzimba wakho kuyoba evamile njalo!